Ukunakekelwa > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Okhilimu bezinyawo zabanesifo sikashukela nge-urea: ukukhetha, umehluko kusuka emafutheni
I-TOP 7 engcono kakhulu yokunakekelwa kwesifo sikashukela esine-endocrine pathology ehambisana nokuthikamezeka kwe-glucose kanye nokuntuleka kwe-peptide hormone insulin, i-hyperglycemia iyakhula emzimbeni. ...
Isikhumba ngesifo sikashukela: umehluko phakathi kwezimonyo zesifo sikashukela nezijwayelekile
Isikhumba Sesifo Sikashukela: Umehluko phakathi kwesifo sikashukela nesijwayelekile Izimbangela Zezinkinga Zesikhumba ku-Diabetes Conventional cosmetics cosmetics, ezifana nesikhumba nokuswakama nokuthambisa, zenzelwe isikhumba esinempilo. ...
Amasokisi wesifo sikashukela
Ungawakhetha kanjani amasokisi esifo sikashukela Sikunikeza ukuthi ufunde isihloko esihlokweni esithi: "ungawukhetha kanjani amasokisi kwabanesifo sikashukela" namazwana avela kochwepheshe. Uma ufuna ukubuza umbuzo noma ukubhala imibono, ungakwenza lokhu kalula ngezansi, ngemuva kwendatshana. ...